प्रदेश ५ को नाम बुद्धसँग जोडेर राख्न दलहरू एकमत, को के भन्छन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रदेश ५ को नाम बुद्धसँग जोडेर राख्न दलहरू एकमत, को के भन्छन् ?
प्रदेश ५ को नाम बुद्धसँग जोडेर राख्न दलहरू एकमत, को के भन्छन् ?
माघ २० गते, २०७४ - ०९:१०
काठमाडाैं । प्रदेश ५ को नामकरण गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने पक्षमा दलहरू सहमत देखिएका छन् । गौतम बुद्धसँगै जोडिएको लुम्बिनी नाम बढी चर्चामा छ । तर, साबिकको लुम्बिनी अञ्चलसँगै राप्ती र भेरी अञ्चल जोडिएको, थारू, मगरात र खस–आर्यको क्लस्टर मिलाउनुपर्ने अवस्था आए बुद्धको नामसँगै कुनै अर्को नाम पनि जोड्न सकिने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । बाँके, बर्दियासम्मलाई विश्वासमा लिन लुम्बिनी नभनी सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध, बुद्धसँगै अर्को कुनै क्लस्टर वा भूगोल जोडेर नाम राख्न सकिने विभिन्न दलका सांसद बताउँछन् ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-संविधानअनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले प्रदेशको नाम राख्न सक्नेछ । अरू विषयमा दलहरूबीच मतान्तर भए पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने र यसको नाम राख्ने विषयमा भने दलीयभन्दा भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटता हाबी हुने देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने श्रम कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको साइनबोर्ड लगाउँदा अचम्मको घटना भयोे । कार्यालयमा पहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भन्ने एउटा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने अर्को बोर्ड लगाइयो । पहिले लगाइएको बोर्डको माथि ‘नेपाल सरकार प्रदेश नम्बर ५’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, बोर्ड लगाइएपछि नेपाल सरकार गलत भएको भन्दै पुनः प्रदेश सरकार लेखिएको बोर्ड छपाएर ल्याएको प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठकले बताए । ‘प्रदेश सरकार भनेर लेख्नुपर्ने भए पनि नेपाल सरकार भएछ, त्यसैले एकपटक लगाइसकेको बोर्डको ठाउँमा पुनः प्रदेश सरकार लेखिएको बोर्ड लगाइएको हो,’ उनले भने । भवनका चौथो र पाँचौँ तलामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने गरी तयारी थालिएको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठकले यसै भवनमा अन्य मन्त्री कार्यालय रहने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
माघ २० गते, २०७४ - ०९:१० मा प्रकाशित